Topic:Business Plans and Proposals
အားဖြင့် Posted: Fisayo ဇွန်လ 3, 2013
တစ်ဦး. Executive summary
ခ. Company description
က c. Market analysis
ဃ. Organization and management
2 မှတ်ချက်များ အပေါ် "How to Write Business Plans and Proposals That Sell"
Jaiyeola | သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:25 နံနက် | ပြန်ကြားချက်
Fisayo | သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:00 နံနက် | ပြန်ကြားချက်